Nyika dzinobvumidza kupinda muSyria pasina vhiza - ALinks
April 29, 2021 alinks VaSiria, vhiza
Vagari veSyria vanogona kuenda kune dzimwe nyika kana matunhu vasina vhiza kana nevisa chete pakusvika.
Ingani nyika dzaunogona kushanyira nepasipoti yeSyria?
Unogona kushanyira nyika makumi matatu kana matunhu ane pasipoti yeSyria usina kumbobvira waisa vhiza.
Ndeapi nyika anogona kushanyirwa nevaSyria vasina vhiza?
MaSyria mazhinji vanogara uye vanofamba muTurkey, Iraq, uye Jordan asi zviri pamutemo ivo vanoda vhiza kuti vapinde munyika idzi.
VaSyria havadi vhiza yekuenda ku:
the national uye iwe unogona kugara kwemazuva makumi mapfumbamwe, asi iwe unoda vhiza kuti upfuure neFrance kana Spain kuti uende kuAndorra;
Bhemudha uye iwe unogona kugara kweinenge mazuva makumi maviri nemana;
Dhominika uye iwe unogona kugara mazuva makumi maviri nemana;
Iran uye iwe unogona kugara mazuva makumi mapfumbamwe nemazuva zana nemakumi masere;
Marazhiya, uye iwe unogona kugara mazuva makumi mapfumbamwe;
Maikironezhiya uye iwe unogona kugara mazuva makumi maviri nemana;
Samoa uye iwe unogona kugara mazuva makumi maviri nemana;
Sudhani uye iwe unogona kugara mazuva makumi matatu.
VaSyria vanogona kuwana vhiza pakusvika pavanoenda ku:
Kepu Vhedhi uye iwe unogona kugara kwemwedzi mitatu;
Komorosi uye iwe unogona kugara kwemazuva makumi mana nemashanu;
Guinea-Bissau uye iwe unogona kugara kwemazuva makumi mana nemashanu;
Macao (SAR China) ;
Madhagasika uye iwe unogona kugara kwemazuva makumi mana nemashanu;
Marudhivhu uye iwe unogona kugara kwemazuva makumi mana nemashanu;
Mozambiki uye iwe unogona kugara kwemazuva makumi mana nemashanu;
Palau uye iwe unogona kugara kwemazuva makumi mana nemashanu;
Rwanda uye iwe unogona kugara kwemazuva makumi mana nemashanu;
Secheres uye iwe unogona kugara kwemwedzi mitatu;
Somaria uye iwe unogona kugara kwemazuva makumi mana nemashanu;
Timor-Leste uye iwe unogona kugara kwemazuva makumi mana nemashanu;
Togo uye iwe unogona kugara kwemazuva manomwe chete;
Tuvalu uye iwe unogona kugara kwemwedzi mumwe;
Uganda uye iwe unogona kugara kwemwedzi mitatu;
Yemeni uye unogona kugara kwemwedzi mitatu.
Izvi pazasi ndezve runyorwa runodzidzisa rwe nyika dzinobvumidza kupinda muSyria pasina vhiza. Paunofamba kuenda munyika ino nepasipoti yeSyria haudi vhiza kana iwe unogona kungowana vhiza pakusvika.
Chero ani ane chero pasipoti anogona kupinda Andorra uye anogona kugara kwemazuva makumi mapfumbamwe. Asi Andorra haina nhandare, saka uchafanirwa kuwana vhiza yeFrance kana Spain, vhiza yeSchengen, kuenda kuAndorra. Unogona kuverenga zvakawanda pane iyo Zvekunze Nyaya webhusaiti yeHurumende yeAndorra. Zviri muchiCatalan, Spanish, French, uye Chirungu, shandisa Google Dudziro kana uchizvida.
Chero ani zvake ane chero pasipoti anogona kupinda muBermuda, kwemazuva makumi maviri nemana. Iwe unogona zvakare kukumbira yekuwedzeredzwa kwemwedzi mitatu, iyo inowanzo kuve nyore kuwana. Pasipoti yako inofanirawo kunge ichishanda kwemazuva makumi mana nemashanu mushure mezuva raunofunga kubva kuBermuda.
Unogona kuverenga zvakawanda pawebhusaiti ye hurumende yeBermuda. Izvi zviri muChirungu chete, saka shandisa Google Dudziro kana uchizvida.
Vanhu veSyria vanogona kuwana vhiza pakusvika kwemazuva makumi mapfumbamwe pavanenge vachienda kuCape Verde. Iwe unofanirwa kutora pre-kunyoreswa (EASE), kunyanya mazuva mashanu usati waenda. unogona kuzviita ku FUNGA webhusaiti uye iwe uchawana nhamba yekushandisa. Pasina pre-kunyoreswa (KUSVIRA) iwe uchafanirwa kubhadhara imwe mari pakusvika.
Unogona kugara kwemazuva makumi mapfumbamwe pamazuva zana nemakumi masere. Iwe haudi vhiza kana uchiuya wakananga kubva kuDhamasiko Airport. Verenga zvimwe pa Iranian yemagetsi vhiza webhusaiti, inova Farsi, ChiGerman, Chirungu, uye chiArabic.
Kusvika pamwedzi mitanhatu.
Visa pakusvika. Mazuva 90, mazuva makumi matatu mahara.
Mazuva makumi matatu nekugona kuwedzera.
Unogona kugara kwemazuva makumi matatu muMalaysia usina vhiza. Verenga zvimwe pane iyo Hurumende yeMalaysia webhusaiti.
Visa pakusvika kwemazuva makumi matatu.
Unogona kuwana visa pakusvika. Inowanikwa kuBosaso Airport, Galcaio Airport neMogadishu Airport.
Visa pakusvika, asi zvinokurudzirwa kuwana usati waenda.
Visa pakusvika kwemazuva manomwe, kuwedzera kusvika mazuva makumi mapfumbamwe
Visa pakusvika kwemwedzi mumwe.
3 mwedzi visa pakusvika. eVisa iripo.
Muchinyorwa chino, ini ndashandisa sosi dzekune dzimwe nyika dzekunze sezvakaratidzwa pamusoro. Usati waenda gara uchitarisa nendege yako kuti ndeapi mamiriro avo ekurega iwe ukwire ndege.
International Air Transport Association (IATA) Yekufamba Center iri zvakare sosi yakanaka. Mamwe manyuko andakashandisa ari Hanley Pasipoti Index, Pasipoti Index, Visalogy, uye CheckVisa.net.
Mufananidzo weChivharo chivharo chepasipoti yeSyria yakatorwa kubva ku Pasipoti Index.
Sei Maitiro ekunyorera Iraq Visa?
Iraq Visa Kune maIndia
Argentina vhiza- mhando uye zvinodiwa
Maitiro ekunyorera vhiza kuMexico? Nhungamiro ipfupi
Us visa yeChina
Turkish visa yevagari veChinese: kapfupi gwara
Maitiro Ekunyorera Sei Visa YeDR-Congo?
Maitiro ekunyorera kweVisa kuPakistan?
Yakanakisa Magetsi Chikwesheso muUK
Dai 6, 2021
Yakanakisa yemagetsi mabrashi India
Afuganisitani (9) rubatsiro (10) Ositireriya (17) Ositiriya (12) Kanadha (18) China (16) Korombiya (6) Dhenimaki (11) DR Congo (7) Furanzi (16) Jerimani (16) tenderera (27) utano (29) Hong Kong (11) Hotels (28) dzimba (15) India (72) Iraki (13) Itari (22) mabasa (40) Marazhiya (12) Mekisiko (22) mari (27) Naijeriya (12) Noweyi (12) Pakisitani (12) vapoteri (36) Rashiya (14) Saudhi Arabhiya (9) chikoro (20) Speini (16) kudzidza (33) Siwizarendi (7) Tairendi (13) zvinhu zvekuita (46) famba (129) Teki (24) Brazil (13) Uganda (9) UK (54) USA (30) zvinoshanda zvinobatsira (21) zvinhu zvinobatsira (88) Venezuela (12) vhiza (72)